Metal Complex Dhayi
Preperse Y. 4GS - Pre...
Pigment Yero 191 / CAS 129423-54-7
Pigment Yero 191 inopenya yero pigment, ine yakanakisa kupisa kupisa, yakanaka kuramba kutama, mamiriro ekunze akanaka, kukurumidza kukurumidza.
Kurudzira: Plastiki, poda yekuputira.
Inokurudzirwa kune mvura yakavakirwa inki uye solvent based inki.
Pigment Yero 183 / CAS 65212-77-3
Pigment Yellow 183 iruvara rutsvuku rweyero nekumhanya kwakanyanya kuchiedza uye mamiriro ekunze, kunyanya mumumvuri wakadzika.Iine opacity yakanaka se organic pigment.Sezvo iine yakanaka kuyerera zvinhu mumapendi, inogona zvakare kushandiswa pakakwirira pigment concentrations (25-30% pigment inoenderana ne yakasimba binder) pasina kukanganisa kupenya.Inofanira kutakurwa mupfungwa kuti kushorwa kune alkali yakasimba kwazvo hakuna kugutsikana.
Pigment Yero 180 / CAS 77804-81-0
Pigment Yero 180 ndeyepakati-yero pigment, ine yakanakisa kuramba, ine kuita kwakanaka mumvura yakavakirwa system.
Kurudzira: Mhando dzakasiyana dzepurasitiki neingi dzekudhinda.Mvura-base pendi yekushongedza, solvent-based pendi, pendi yeindasitiri, poda coating.
Ndokumbira utarise TDS yePigment Yellow 180 pazasi.
Pigment Yero 155 / CAS 68516-73-4
Pigment Yero 155 ihwo hupfu hweyero inopenya, ine kupikisa kwakanyanya, ine kuita kwakanaka mumvura yakavakirwa system.
Kurudzira: Mhando dzakasiyana dzepurasitiki neingi dzekudhinda.Mvura-base pendi yekushongedza, pendi yeindasitiri.
Pigment Yero 154 / CAS 68134-22-5
Pigment Yero 154 igirini yakasvibira yero pigment, ine kupikisa kwakanyanya, ine kuita kwakanaka mumvura yakavakirwa system.
Ndokumbira utarise TDS yePigment Yellow 154 pazasi.
Pigment Yero 151 / CAS 31837-42-0
Pigment Yellow 151 igirini yakasvibira yero pigment, ine kupikisa kwakanyanya, ine kuita kwakanaka mumvura yakavakirwa system.
Ndokumbira utarise TDS yePigment Yellow 151 pazasi.
Pigment Yero 150 / CAS 68511-62-6
Pigment Yero 150 isimba reyero rakasimba nekumhanya kwakanyanya kuchiedza uye mamiriro ekunze, kunyanya mumumvuri wakadzika.Iine opacity yakanaka se organic pigment.Sezvo iine yakanaka kuyerera zvinhu mumapendi, inogona zvakare kushandiswa pakakwirira pigment concentrations (25-30% pigment inoenderana ne yakasimba binder) pasina kukanganisa kupenya.Zvinofanira kurangarirwa kuti kushorwa kune alkali yakasimba kwazvo hakuna kugutsikana.Ndapota tarisa TDS yePigment Yellow 150 pazasi.
Pigment Yero 110 / CAS 5590-18-1
Pigment Yellow 110 itsvuku yero pigment, ine yakanakisa kugadzirisa kugadzikana, kugona kuparadzira kwakanaka, kujeka kwepamusoro, kupisa kwakanyanya uye nekukasira zvivakwa.
Yakakurudzirwa kune ese pendi, epurasitiki, Fiber uye offset ingi, UV ingi.Inokurudzirwa kumvura yakavakirwa inki uye machira ekudhinda.Pendi yemvura-yakadzika yekushongedza, solvent-base yekushongedza pendi, pendi yeindasitiri, poda coating, pendi yemotokari, coil coil, machira pendi.
Ndokumbira utarise TDS yePigment Yellow 110 pazasi.
Pigment Yero 83 / CAS 5567-15-7
Pigment Yero 83 ndeye yakatsvuka yero pigment ine kumira zvakanaka kune zvese chiedza uye zvinonyungudutsa, kupisa kuramba.
Kurudzira: Mvura yakavakirwa inki, offset inki.
Yakakurudzirwa inki inonyungudutsa, pendi yeindasitiri, pendi yekushongedza, coil coil, textile printing uye PVC, RUB, EVA,PE.
Pendi yemvura-yakadzika yekushongedza, solvent-base yekushongedza pendi, pendi yeindasitiri, poda coating, pendi yemotokari, coil coil, machira pendi.
Iwe tarisa TDS yePigment Yellow 83 pazasi.
Pigment Yero 74 / CAS 6358-31-2
Pigment Yero 74 ndeyero inopenya ine yakakwira opaque uye yakanaka kwazvo kuramba.
Kurudzira: Ingi yakavakirwa pamvura, pendi yemvura uye kudhinda machira.Yakakurudzirwa mvura yakavakirwa pendi yekushongedza uye NC ingi, offset ingi.Mvura-base yekushongedza pendi, solvent-base yekushongedza pendi, pendi yeindasitiri, coil coil.
Ndokumbira utarise TDS yePigment Yellow 74 pazasi.
Pigment Yero 65 / CAS 6528-34-3
Pigment Yellow 65 ipigment yeyero ine mumvuri mutsvuku, asi mumvuri mutsvuku ishoma pane Yellow HR, Uye ine kurwisa kwakanaka kune zvinonyungudutsa, kupenya kwakanaka kwechiedza, yakanaka acid kuramba, yakanaka alkali kuramba uye kuhwanda kwakanyanya.
Recomment: Mvura yakavakirwa inki, pendi yemvura, pendi dzeindasitiri.Mvura-base yekushongedza pendi, solvent-base yekushongedza pendi, pendi yeindasitiri, coil coil.
Ndokumbira utarise TDS yePigment Yellow 65 pazasi.
Pigment Yero 17 / CAS 4531-49-1
Pigment Yero 17 iruvara rwegirinhi rweyero ine ruvara rwakajeka uye rwakajeka.
Kurudzira: Offset ingi, NC ingi, PA ingi, textile kudhinda, PVC, RUB.
Ndokumbira utarise TDS yePigment Yero 17.
Ningbo Chaiyo New Material Technology CO., LTD
Runhare: +86 574 88139027
Kero: Tuqiao Village, Zhonghe Street, Yinzhou, Ningbo, China.
taura nesu pano
© Copyright 20182022 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.